Qiyaamo - Baraajii Musalsal Hindi oo qiso aad u macaan leh.
Home/Qiyaamo - Baraajii Musalsal Hindi oo qiso aad u macaan leh.
Qiyaamo – Baraajii Musalsal Hindi oo qiso aad u macaan leh.
Qiyaamo – Baraajii Musalsal Hindi oo qiso aad u macaan leh. Musalsalkan waa mid qiso macaan kuna saabsan gabar sabar badan oo la magac baxday Baraajii, Musalsalkan ayaa deegaanada Soomaalida kuyeeshay saameyn iyadoo alaabada lagu iibiyo suuqyada & nooc ka mid ah qaadka loo bixiyay Baraajii. Sidoo kale qiyasada musalsalka ayaa ah mid aad u sareysa oo si wanaagsan looga shaqeeyay waxaana idiin soo diyaariyay shirkada Saafi Films.
Qiyaamo – Baraajii Xayeesiin
Qiyaamo – Baraajii Part 1
Qiyaamo – Baraajii Part 2
Qiyaamo – Baraajii Part 3
Qiyaamo – Baraajii Part 4
Qiyaamo – Baraajii Part 5